2010 Election – democracy for burma
#MYANMAR #BURMA #RCSS #STATEMENT #International #Day #Against #Drug #Abuse
On June 27, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Statement On International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 26 June 2014
USDP leader:elections were held last November, because overt transfer of power to his party “would have looked unseemly
On May 5, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
THURSDAY, 05 MAY 2011 12:35 S.H.A.N.
The military proxy party’s effective leader U Aung Thaung toldagathering of party members in Lashio yesterday that elections were held last November, because overt transfer of power to his party “would have looked unseemly”, according to sources close to the party.
U Aung Thaung (Photo: moi1blogmyanmar.blogspot.com)
U Aung Thaung, who is known to be an intimate of retired junta leader Senior Gen Than Shwe, was also said to have claimed, “All the three sovereign powers: legislative, executive and judicial, have been vested in the (Union Solidarity and Development) Party.”
He promised that “since we have learned the strengths and weaknesses of each township, the USDP will bearunaway winner in the next elections (in 2015).”
Speaking on Aung San Suu Kyi, who was released on 13 November, followinga7 year house arrest, he said she had been allowed to engage only in activities “that will not damage us”.
U Aung Thaung, accompanied by former Northern Region Command Commander Maj Gen Maung Maung Swe, is leaving for Muse and Namkham an the Sino-Burma border today.
The USDP, formed out of the Union Solidarity and Development Association (USDP), supposedlyaCivil Society Organization founded by the ruling military junta in 1993, is headed by ex-General Thein Sein, who was elected as President in March. Since then, the party’s day to day affairs have been reportedly handled by regime stalwarts such as Aung Thaung and Htay Oo.
On May 3, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
သမိုငးေ်ခြရာရှင်ေလးတွေ လျောက်တဲ့လမ်း-K Times
On April 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
“နိုင်ငံရေး” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေက တောခိုနေတဲ့ သူပုန်တွေကို ပြေးမြင်လိုက်ကြတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ကရင်နီပြည်မှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေပါလို့ ပြောလိုက်ရင် မှားမယ်လို့တော့ မထင်ပါ။ အဲဒီစကားလုံးတွေ သုံးမိရင် သူပုန်နဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုပြီး ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခံရတတ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ အဲဒီစကားလုံး တစ်လုံးနဲ့ ပြည်သူလူထုတို့ကို ထိန်းချုပ်နေတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။
အထူးသဖြင့် တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် တက်လာကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို အလှအပတွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဆင်ယင်ကြသလို မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိရပ်ရွာနဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတို့ကိုလည်း တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုကြတယ်။
မိမိတိုင်းပြည်ဟာ တခြားသော ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ် အသိုင်းအဝိုင်းထဲသို့ ရောက်လာရလေအောင် လူငယ်တွေ အနေနဲ့ တဖက်တလမ်းကနေပြီး ကြိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ အားတက်မာန်တက် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရှေ့မှာ တားဆီးခြိမ်းခြောက်မှုတွေက တပုံတပင်ကြီးပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် လူငယ်တွေဟာ နောက်မဆုတ်ကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ လျှောက်နေတဲ့ လမ်းဟာ လမ်းမှား မဟုတ်လို့ပါဘဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဟာ စစ်တပ်ကနေ တဖက်သတ် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အတွက် ကရင်နီလူငယ်များကို ဦးဆောင်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒါဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတို့မှာ ပါဝင်တဲ့ လူငယ်များကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တဲ့အပြင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာပေး အစီအစဉ်တို့မှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်အလုပ်ကျွေးပြုနေကြတဲ့ လူငယ်တို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ကရင်နီ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ အလုပ်ကျွေးပြုခဲ့ဖူးသူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကရင်နီလူငယ် နှစ်ဦးကို လွိုင်ကော် အခြေစိုက် ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ်မှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။
“သူတို့ကို ပုဒ်မှ ၁၇/၁ နဲ့ စွပ်စွဲပြီး ဖမ်းထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်အချိန် လွတ်မလဲ၊ ဘယ်အချိန်ထိ ထောင်ဒါဏ်ချမှတ်မလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး” လို့ ကရင်နီပြည်ထဲရေးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗားမားနိုင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီလူငယ် နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်နိုင်ဖို့ ကရင်နီအပစ်ရပ်အဖွဲ့ရဲ့ ကူညီမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့တာပါ။
“ဒီဘက် (နယ်စပ်ရှိ ကရင်နီလူမှု အသိုင်းအဝိုင်း)က လူတွေနဲ့ တွဲပြီး အလုပ်အကျွေး ပြုတဲ့ သူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေ မှန်သမျှ သူတို့ (အပစ်ရပ်အဖွဲ့)က ချွန်ပေးရတယ်။ ဒကစတို့ ထောက်လှန်းရေးတို့ကို သတင်းပေးရတယ်။ ဒါမှ သူတို့ ရိက္ခာတွေ၊ ငွေတွေ၊ သူမျက်နှာ ရတာပေါ့။ တကယ်လို့ သူက အဲလိုမလုပ်နိုင်ရင် စစ်တပ်ကလည်း သူတို့ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ သူတို့ အလုပ်မလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်မှုမျိုးကို ခံရတာပေါ့” လို့ ဗားမားနိုင်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့၂ဝဝ၈ မေလမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်ဖို့ လူငယ်များက ဦးဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ကရင်နီ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ခွန်းဘီးဒူ (ခေါ်) လွီးဇီငြိမ်၊ ကေကောရီယိုနဲ့ ဒီးဒီတို့ကို စွဲချက်တင်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၃၇ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကေကောရီယိုဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တစ်နေရာမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကရင်နီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း SDC မှာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကရင်နီပြည်တွင်းမှာ အဲဒီလိုဘာသာရပ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာခွင့် မရှိတဲ့အတွက် နယ်စပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ SDC ကျောင်းကဲ့သို့ ဆယ်တန်းလွန်ကျောင်းတို့မှာ လူငယ်တွေ ထိုးဖောက်ပြီး လေ့လာကြရပါတယ်။
အခု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းမှာ ၈ ကြိမ်မြောက် SDC ကျောင်းဆင်းပွဲ အခန်းအနားတစ်ရပ် ကျင်းပပါတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အတွက် ဒု-ကျောင်းအုပ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ရီရယ်ဝင်းက မိန့်ခွန်းအမှာစကား ပြောကြားရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဘာသာရပ်တွေနဲ့ မိမိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲ ပြန်လည်အလုပ်ကျွေးပြုရာမှာ ကေကောရီယိုတို့လို ကျောင်းသားဟောင်းတွေရဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရှင်းပြသွားပါတယ်။
ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပခဲ့သော ၈ ကြိမ်မြောက် ကရင်နီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
“ဒီကနေ့အပါအဝင်ဆိုလို့ ရှိရင် (၁၄၉) ယောက် ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ဒီလူဦးရေကို ကျနော့် ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ မနေ့က ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းတွေအထိ ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပြန်ပြီး အလုပ်အကျွေး ပြုနိုင်တာက (၇၅) ယောက်ကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ ဒီပြည်တွင်းကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းတွေက ၁၃ ယောက်၊ ၁၅ ယောက်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ယောက် (xxxx) ကတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ အဲမှာ အသက်ပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်။ တယောက် (ကေကောရီယို) ကတော့ ထောင်တွင်း ၃၇ နစ် ကျကျန်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ အဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး နောက်ပြီးမှ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ သူက campaign (စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး) သွားလုပ်တယ်နော်။ campaign ဟို lobby သွားလုပ်ရင်းနဲ့ အဲမှာ ထောင်ကျခံရတာ ရှိပါတယ်။” Continue reading “သမိုငးေ်ခြရာရှင်ေလးတွေ လျောက်တဲ့လမ်း-K Times” →
Ethnic Struggles Are Central To Burma’s Future – Analysis by David I.Steinberg
On April 30, 2011 April 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
All avenues of social mobility and advancement are under military control. Political power, higher education, civil society, the sangha (monkhood), and the economy are dominated by the central military, or tatmadaw, which remains the most direct route to social mobility and authority. Foranational ethos to prevail and be accepted, these avenues must be seen to be reasonably open to all ethnicities and religions. They currently are not; the upper levels of the military are virtually all Burman. Continue reading “Ethnic Struggles Are Central To Burma’s Future – Analysis by David I.Steinberg” →
View on 2010 Government by 11 Activist Groups Coalition Inside Burma- Eng/Bur
On April 29, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
President Thein Sein has formed the President’s Advisory Council with (9) members-engl